အမဲသားနှင့်မွှေးတစ်သင်းလုံးကကစားသမားနှင့်အတူအရသာ hash | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဤသည် hodgepodge သင်ခဲကိုမြည်းစမ်းခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ကြသည်။ နွေရာသီ menu ကိုအမျိုးမျိုးဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စာရွက်။
အဆိုပါပန်းကန်အရသာကျေနပ်စရာနှင့် savory ဖြည့်စွက်နှင့်အတူအအေး kvass နှင့်အတူဝတ်ဆင်, ဿုံလန်းဆန်းဖြစ်ပါတယ်။
4 ဝေမျှအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းများ hash:
ကုန်ကြမ်းအမဲသား၏ 150 ဂရမ်;
unsweetened hash များအတွက် 1 ဌ kvass,
3 သေးငယ်တဲ့ kartoshinu;
ပဲပိစပ်ဆော့စ်၏ 40 ml ကို;
1 အနုပညာ။ l ။ စပျစ်ရည်ရှလကာရည်;
မြည်းစမ်းဖို့ Dijon မုန်ညင်း;
ဆှတျဖနျြးတစ်ဝက်ရောင်ခြည်နံနံခြင်းနှင့်ဇီယာစေ့သည် ဖြစ်. ,
ဆား, ငရုတ်ကောင်းအရောအနှောနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ.
ဘယ်လိုအမဲသားနှင့်အတူ hodgepodge ချက်ပြုတ်ရန်
1 ။ အာလူး, သင်အလိုဆန္ဒ, သင်ခွံသို့မဟုတ်မရနိုင်သည်။ သို့သော်သင်လိုချင်လျှင်ယူနီဖောင်းနှင့်ဆေးကြောပါ။ ထို့နောက်ဥများကိုအအေးခံ။ အခွံခွာပြီးနှိပ်စက်ပါ - ရိုးရာ okroshka ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ တစ်ဇွန်းနှင့်အတူမွှေ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ နှင့်ငရုတ်ကောင်း။
2 ။ နူးညံ့သောနံ့သာမျိုးနှင့်တကွမြည်းစမ်းဖို့ရာသီသည်အထိဆီသည်အခြားဇွန်းအဘို့အမဲသားလျော့နည်းမကြာခဏဒဏ်ချက်များနှင့်အညို။
3 နောက်ထပ်စာရွက်အရ, အမဲသားနှင့်အတူ okroshka - အသားအအေးသည်အထိပြုတ် Hard- ပြုတ်ကြက်ဥ။ ရေအေးထဲထည့်ပြီးအေးသွားတဲ့အခါသန့်ရှင်းပါ။ ပြီးတော့အာလူးလိုမျိုး Cube တွေထဲကျသွားတယ်။ အစိမ်း၊ သခွားသီးနှင့်မုန်လာဥများကိုဆေးကြောပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုဘားများ (သို့) Cube များထဲသို့ခုတ်ယူပြီးအစိမ်းရောင်များအားလုံးကိုကြိတ်ဖြတ်ပါ။
4 ။ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်, kvass ကိုဘူးထဲသို့ထည့်ကာထည့်ပါ စပျစ်ရည်ကိုရှာလကာရည်, မုန်ညင်းနှင့်ပဲပိစပ်။ ဆား, ကောင်းစွာရောမွှေပါ။ အအေးခံရန်ဖြည့်ထားသောဘူးကိုထားပါ။
5 ။ hash လျှောက်ထားရန်, အင်တုံကိုယူပြီးတော့ရောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, အန်စာတုံး, ကြက်ဥနှင့်အမဲသားချထားပါ။ သငျသညျ chilled သောမွှေးနှင့်စပ်တစ်သင်းလုံးကကစားသမား, သွန်းလောင်း။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် hash ရက်ရက်ရောရောအစိမ်းရောင် Grist ။
Okroshka အသား - ယခုနှစ်၏ 1861 စာရွက်
65 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,238 စက္ကန့်ကျော် Generate ။